पोखरा, २८ कात्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कास्की २ की उम्मेदवार विद्या भट्टराई जिताउन चुनावी प्रचारप्रसार आज (बिहीबार) पोखरा वडा ७ मा जारी छ । मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा मतदातासमेत स्व. रवीन्द्र अधिकारीको अधुरा सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता बोकेर चुनावी अभियानमा होमिएकी उनकी धर्मपत्नी विद्यालाई जिताउनुपर्ने बताएका छन् । पोखराको नयाँबजारस्थित ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा आशीर्वाद ग्रहण गर्दै सुरु भएको आजको चुनावी प्रचार कार्यक्रम पोखरा वडा ७ अन्तर्गत बिहान प्रगतिनगर, प्रगतिटोल, राधाकृष्ण टोल, घारीपाटन र तीनकुने लगायत क्षेत्रमा सम्पन्न भएको छ । घरघरबाट निस्केर मतदाताले फूलको गुच्छाले उम्मेदवार विद्याको स्वागत गर्दै भोट दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
सो क्षेत्र उम्मेदवार विद्या पुग्दा ८६ वर्षीया कृष्णमाया पराजुली वडा नं. ७ र १५ जोड्ने पक्की पुल स्व. रवीन्द्र अधिकारीले शिलान्यास गरेको कुरा सम्झिँदै भक्काइनिइन् । घरदैलोपछि राधाकृष्ण मन्दिरमा भएको चुनावी सभामा बोल्दै उम्मेदवार विद्याले स्व. रवीन्द्र अधिकारीको समृद्धिको अधुरो सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सहित आएको बताइन् । उनले पोखरा चक्रपथ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण लगायत महत्वपूर्ण कार्यको पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले समाजमा व्याप्त असमानताको अन्त्य गर्दै सुकुम्बारीलाई रातो लालपुर्जा दिलाउने कार्यमा आफ्नो कार्यदिशा रहने बताइन् । पोखरा ७ को विशेषगरी प्रगतिनगर र प्रगतिटोल सुकम्बासी वस्ती पर्दछ ।
विगतका कमजोरी सच्चाएर नेकपा सधैँ अगाडि बढ्ने भन्दै अबको उपनिर्वाचनमा कास्की २ मा नेकपाको चुनाव चिन्ह् सूर्यमा मतदान गर्न सम्पूर्णमा आग्रह गरे । यस्तै, नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं पोखरा ७ को चुनावी कमाण्डर सीता गिरी वलीले रवीन्द्रको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति विद्या रहेको स्पष्ट पार्दै उनको अधुरो सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारीका साथ चुनावी मैदानमा होमिएको बताइन् । उनले विद्या रवीन्द्रपत्नीमात्र नभै महिलानेतृ एवं प्राज्ञीक व्यक्ति समेत रहेको हुँदा भोट दिएर जिताउन आग्रह गरिन् ।
पोखरा ७ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र बरालले वडाको गतिविधि उल्लेख गर्दै ५ वर्षभित्रै आफ्नो वडामा धूलोबाटो नहुने प्रतिबद्धता गरे । कार्यक्रमको संचालन नेकपा वडा ७ का अध्यक्ष एवं चुनावी इञ्जार्ज पुरुषोत्तम रेग्मीले गरेका थिए । नेकपाका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । बिहीबार नै पोखरा ७ अन्तर्गत पुष्पलाल पार्क, पोखरीपाटन र रत्नचोकमा चुनावी सभा एवं घर दैलो हुँदैछ ।